API 602 Globe Valve A105N Class 800LB NPT Bolt Bonnet 1 Inch, China API 602 Globe Valve A105N Class 800LB NPT Bolt Bonnet 1 Inch Manufacturer, mpamatsy, Factory - Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika)
API 602 Globe Valve A105N Kilasy 800LB NPT Nopetahana Bonnet 1 Inch
Titan Valve dia mamatsy valva vy vy vita amin'ny vy 602 vita amin'ny 1/4 4 ka hatramin'ny 800 util izay ampiasaina betsaka amin'ny serivisy avo lenta sy avo lenta. Ireo valizy vita amin'ny bolongana vy (sokajy 1500, kilasy 2500, kilasy XNUMX) sokajy volbe, izay matetika ampiasaina amin'ny indostria solika sy gazy voajanahary, dia azo vita amin'ny vy karbonika, vy vita amin'ny vy, ary vy tsy misy fangarony.
Titan Valve dia mamatsy valva vy vy vita amin'ny vy 602 vita amin'ny 1/4 4 ka hatramin'ny 800 util izay ampiasaina betsaka amin'ny serivisy avo lenta sy avo lenta. Ireo valizy vita amin'ny bolongana vy (sokajy 1500, kilasy 2500, kilasy 602) sokajy volbe, izay matetika ampiasaina amin'ny indostria solika sy gazy voajanahary, dia azo vita amin'ny vy karbonika, vy vita amin'ny vy, ary vy tsy misy fangarony. Ny fifandraisana farany dia azo omena toy ny welding welding (BW), flanged (RF / RTJ), threaded (NPT), socket welding (SW). Noho ny habeny sy ny valizy torsiany somary ambany dia mavesatra ny kodiarana vy XNUMX% vita amin'ny bolongana vy. Ny fifandraisana amin'ny vatany sy ny vatomamy dia azo omena ho toy ny bonnet vita amin'ny lasitra, bonnet baoritra, na baoty mifatotra RTJ. Visy & zioga ivelany (OS&Y) misy tsanganana miakatra, ary ny seranan-tsambo feno / mahazatra dia fananganana mahazatra ny valva-bolam-bolantsika vy. Misy tombo-kase / bonnet fanampiny, tombo-kase Y ary bonnet Union azo apetraka amin'ny fangatahana.
Fitsipika momba ny famolavolana sy ny endrika famolavolana
Fenitra famolavolana / fanaraha-maso: API 602, ASME B16.34, ASME B16.5, EN ISO 15761, ASME B16.25, ASME B1.20.1, ASME B 16.11.
● Fametahana tombo-kase mahomby amin'ny seza any ambadika mba hahazoana antoka fa tsy misy fivoahan'ny fotony.
● Ny kapila voatarika tanteraka dia manome antoka ny fampifanarahana marina ny kapila sy ny seza ary mampihena ny akanjo amin'ny sehatry ny seza.
● Ny fikolokoloana visy & zioga ivelany dia manamora ny fikojakojana boaty famenoana.
● Gasket peratra metaly na gasket ratra spiral dia azo ampiharina mba hiantohana ny tombo-kase mafy amin'ny vatan'ny vatana / bonnet.
● Fomba maro karazana kapila izay azo omena amin'ny tanjona samihafa.
No. Part Name Fitaovana
Carbon Steel Alloy Steel Inôksa
4 Voan'ny Voanjo ASTM A276-420 ASTM A276-420 ASTM A276-420
6 Kodiarana tanana Iron vy Iron vy Iron vy
7 SAMPA ASTM A182-F6a ASTM A182-F6a ASTM A182-F304 / F316
9 Gasket 304SS / Spiral Wound Graphite 304SS / Spiral Wound Graphite 304 / 316SS / Graphite maratra
10 fonosana manjarano manjarano manjarano
11 fonosana Carbon Yarn Carbon Yarn Carbon Yarn
14 -bazana ASTM A194-8 ASTM A194-8 ASTM A194-8
15 Voanjo Handwheel Carbon Steel Carbon Steel ASTM A276-304
17 Takelaka anarana ASTM A240-304 ASTM A240-304 ASTM A240-304
Forve Steel Globe Valve F316 F11 F22 F51 800LB SW DN15
API602 Valve vita amin'ny vy vita amin'ny vy 150LB 300LB A105 Flange RF mifangaro